Otu okirikiri nke Steroid ga-eme ihe ọ bụla - BikeHike
Otu Cycle nke Steroid ga-eme ihe ọ bụla
Ogologo oge ole ka okirikiri steroid nke mbụ gị kwesịrị ịdị?
Kedu oge ị ga-ahụ nsonaazụ sitere na steroid?
Kedu ihe kacha mma steroid maka ndị mbido?
Kedu usoro okirikiri steroid kacha mma?
Ndị steroid na-arụ ọrụ n'enweghị arụ ọrụ?
Kedu ka ị ga-esi mara ma mmadụ na-aṅụ steroid?
Kedu ka ị ga-esi buru ibu na-enweghị steroid?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị kwụsị ịṅụ ọgwụ steroid?
Creatine ọ bụ steroid?
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị ịgbatị testosterone?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka testosterone enanthate ka ọ banye?
Kedu ihe kacha mma steroid iji wuo ahụ ike?
Gịnị bụ ezigbo okirikiri okirikiri?
Ị nwere ike ịgbakọ Tren na Deca ọnụ?
Ndị pro bodybuilders niile na-eji steroid?
Ị nwere ike nweta mkpọ isii na-enweghị steroid?
Kedu ka ndị na-ahụ maka ahụ si enwe nnukwu ibu?
Kedu ka ị ga-esi chụpụ ASAP?
Ọ ka mma ibu ibu ma ọ bụ dabere?
Kedu ka m ga-esi nweta abs shredded?
Ndị buff dudes na-ewere steroid?
A, ndị ọrụ ga-ewere steroid maka izu isii ruo izu 16 n'otu oge, na-esote izu ole na ole nke ịṅụ obere doses ma ọ bụ enweghị steroid ma ọlị. Ndị na-eme egwuregwu maara na a ga-anwale ha - dịka ọmụmaatụ, n'oge mmemme ma ọ bụ asọmpi - ga-ewe oge okirikiri ha na-atụ anya ịgafe ule ọgwụ.
Amamihe enwetara bụ na a ghaghị ịgbanye testosterone kwa izu ma ọ dịkarịa ala izu 10. Ma ọkà mmụta sayensị egwuregwu Robert Weatherby nke Mahadum Southern Cross dị na Lismore, New South Wales, Australia, bụ onye mere ọmụmụ ihe ahụ, chọpụtara na mmụba kachasị ukwuu na arụmọrụ bịara mgbe naanị izu atọ gasịrị.
- anavar (oxandrolone) bụ ihe kasị dịrị nchebe nke niile steroid maka beginners, na ọ dị nnọọ nro karịa testosterone. Uru nke anavar bụ: ya. Dị ka steroid nke anabolic nwere ike ịbawanye ụba anụ ahụ, ha nwere ike ịbụ ihe ọzọ nwere ike ime. Otú ọ dị, dị ka steroid ndị ọzọ niile, ọ bụ imeju na-egbu egbu.
Anavar nwere ike ịbụ steroid kacha mma maka ịbelata oke ibu, usoro steroid kacha mma maka ịgbanye bulking. Anavar bụ ewu ewu n'etiti bodybuilders n'ihi na ọ na-emekwa dị ka a diuretic otú ị na-atụfu mmiri kwa, kasị mma steroid mbadamba maka uru uru. Maka ndị n'ime gị na-achọ ọdịdị ahụ dị nro na akọrọ mgbe ị nọ na ogbo, Anavar dị mma.
Ndị steroid anabolic, nke a na-akpọkwa anabolic-androgenic steroid (ass), nwere ike wulite ahụ ike ma melite arụmọrụ egwuregwu, ma ha nwekwara ike inwe mmetụta ọjọọ dị ukwuu, karịsịa mgbe ejiri ya. Steroid ga-eme ka ị na-ebuwanye ibu, ngwa ngwa, dị ike, na-abawanye ọrụ neuromuscular ọbụna na-enweghị ịrụ ọrụ.
Ihe ịrịba ama nke Steroid Jiri otutu. Uru dị ngwa ngwa / ibu ibu. Nnukwu ara (n'ime ụmụ nwoke) Paranoia. Imewanye ihe. Uto ntutu ihu (n'ime ụmụ nwanyị).
FFM: (bodyweight x (100 - bodyfat percentage in%)) / 100 ∆ Ha kwubiri na ndị na-eme egwuregwu na-adịghị anabolic steroid nwere Index nke gburugburu 25 na max. Ndị ọrụ steroid nwere ike karịa uru ahụ, ọtụtụ mgbe site na nke ukwuu. Nke a na-eduga n'echiche na FFMI nke gburugburu 25 bụ oke okike.
Enweghị ike ịkwụsị iji steroid na mberede; tapering ọgwụ na-enye ndị adrenal glands oge ịlaghachi n'ụdị ha nkịtị nke nzuzo. Mgbaàmà na ihe ịrịba ama ịwepụ (adịghị ike, ike ọgwụgwụ, agụụ na-ebelata, oke ibu, ọgbụgbọ, vomiting, afọ ọsịsa, mgbu afọ) nwere ike iṅomi ọtụtụ nsogbu ahụike ndị ọzọ.
Ọ bụ ngwakọta nke amino acid nke imeju, akụrụ, na pancreas mepụtara. Creatine abụghị onye steroid - a na-ahụkarị ya na akwara na anụ na-acha uhie uhie na azụ, ọ bụ ezie na ọ dị ala karịa n'ụdị ntụ ntụ a na-ere na weebụsaịtị bodybuilding yana na GNC mpaghara gị.
Echiche n'ozuzu bụ na nchịkwa nke testosterone na ahụike, ndị okenye maka izu 52 (1 afọ) na-esote okirikiri nke 4 izu nke nchịkwa testosterone na izu 4 na-enweghị testosterone (ya bụ, usoro cycled kwa ọnwa) ga-enye otu uru ahụ na ike anụ ahụ, oke akwara, na njupụta ọkpụkpụ dịka ọkọlọtọ.
E gosipụtara iji testosterone enanthate mee ka ike dịkwuo elu n'ime izu 6-12 nke nchịkwa (2, 9), Otú ọ dị, ọ bụghị ihe doro anya ma ọ bụrụ na uru ergogenic pụtara ìhè na-erughị izu 6.
1) D-Bal site Crazy nnukwu Ya mere, ọ na-abịa dị ka ihe ijuanya na D-Bal bụ Crazy Bulk kasị mma-ere emeju. Nkwenye ha imeziwanye ngwaahịa ha na imepụta ihe na-enyere gị aka iwulite ahụ ike n'ụzọ dị mma ma dị irè bụ ya mere anyị ji chee na D-Bal kwesịrị ekwesị maka nọmba-otu ntụpọ na ndepụta anyị.
Nke mbụ, cycles bulking kacha dị irè na-abụkarị opekata mpe ọnwa 3-4, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ogologo oge. Ebe nke a nwere ike isi ike maka ụfọdụ ndị bụ na ọ bụrụgodị na ị bụ incredibly n'elu gị macronutrients, ị ga-abụkwa na-enweta ụfọdụ abụba mgbe inweta muscle na a bulking okirikiri.
Enwere ike iji Tren tinye Deca? Ee, ọ nwere ike ma nwee mmetụta dị mma mgbe ị na-ebuwanye ibu. A ga-abawanye nha na uru ike n'adịghị ka ịgba ọsọ tren naanị. Mmetụta dị n'akụkụ ahụ agaghị adịkwa njọ karị, ma e jiri ya tụnyere ime usoro nke tren-naanị (na-abụghị mmechi testosterone dị njọ).
Ọ bụ ezie na ojiji yiri ka a na-ahụkarị n'etiti asọmpi bodybuilders - 54 pasent nke ndị na-ewere steroid, otu nnyocha chọpụtara - ọ bụ na o siri ike na-ejedebeghị na ndị bi.
Enwere m ike iwulite ahụ ike wee buru ibu na-enweghị steroid? Azịza ya bụ ee. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na onye na-eji steroid mara mma ga-eto eto n'agbanyeghị ụdị ọzụzụ ọ na-eme, onye na-ebuli elu kwesịrị ilebara anya nke ọma na otú o si emega ahụ, ihe mgbakwunye ndị ọ ga-eji na otú / mgbe ọ ga-eri nri.
Site na mgbatị ahụ dị mkpụmkpụ mana nke siri ike yana oge maka mgbake, ha anaghị emebiga ihe ókè, mana na-enye akwara ahụ oge iji zuru ike ma too. Ihe si na ya pụta bụ bodybuilders bụ ndị nwere ike nweta ikike mkpụrụ ndụ ihe nketa ha maka ịmepụta oke ahụ na ọdịdị dị nro.
Ntuzi zuru oke gị maka ịdọka nzọụkwụ 1: Ọzụzụ ike iji wuo akwara. Nzọụkwụ 2: Beechapụ calorie ka ọ ghara ibu ibu. Nzọụkwụ 3: Rie protein zuru oke. Kwụpụ 4: Rie oke abụba dị mma. Nzọụkwụ 5: Gbalịa ịgba ígwè. Nzọụkwụ 6: Jiri njikwa akụkụ. Kwụpụ 7: Tinye Ọzụzụ Ogologo Oge Dị Elu (HIIT) Nzọụkwụ 8: Nweta Ụra.
Ahụ gbadara agbagọ dị mma karịa ahụ buru ibu n'ihi ihe ndị a: Ọ na-agbanwe agbanwe, na-enye gị ọdịdị ụda olu mara mma. A na-enweta ya site na mfu nke abụba dị n'èzí iji kpughee akwara dị n'okpuru. N'isiokwu a, ị ga-amụta banyere uru ahụike dị n'ụdị ahụ abụọ, otu esi enweta ha na nke masịrị gị.
Nke a bụ ụzọ 8 dị mfe iji nweta mkpọ isii ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu. Mee Cardio ọzọ. Kekọrịta na Pinterest. Mee mgbatị ahụ akwara afọ gị. Mụbaa oriri protein gị. Gbalịa Ọzụzụ Ogologo Oge Dị Elu. Nọgidenụ na-ekpo ọkụ. Kwụsị iri nri edozichara. Belata Carbs a nụchara anụcha. Dejupụta Fiber.
Eji Steroid ejedebeghị na nnukwu dudes buff. Ọtụtụ ụmụ okorobịa dị obere na-ewere steroid iji gbalịa ka ha na-agbaji ma nweta uru ahụ siri ike.
Olee otú iji okirikiri Steroid
Kedu ka Steroid si emetụta okirikiri nsọ nwanyị
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka Steroid ga-eme
Azịza ngwa ngwa: Otu esi agbagharị steroid n'enweghị nsogbu
Azịza ngwa ngwa: Steroid nwere ike imetụta okirikiri nsọ nwanyị
Steroid nwere ike gbanwee okirikiri nsọ nwanyị
Ajụjụ: Onye na-ere ahịa okirikiri ọ na-eri ihe ọ bụla
Azịza ngwa ngwa: Olee otú ọnụ ahịa bụ okirikiri nke Steroid
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka ị nwere ike ịgbagharị na steroid
Ogologo oge ole bụ 1 Cycle of Steroids
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka ị kwesịrị ị na-agbapụ na steroid
Ego ole bụ okirikiri nke Steroid